चर्चित हास्य कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ ‘बल्छी धुर्बे’लाई पुत्र लाभ ! बधाई दिनेको ओइरो ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/चर्चित हास्य कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ ‘बल्छी धुर्बे’लाई पुत्र लाभ ! बधाई दिनेको ओइरो !
काबुलमा देखियो का’रुणि’क दृश्य ! विदेशी सैनिकलाई आफ्नो सन्तान सुम्पिँदै अफगानीहरू (भिडियो)
ए’जेन्सी। अफगा’निस्तानको रा’जधानी काबुलमा यस सा’ताभरि का’रु’णिक दृ’श्यहरू देखिएका छन् । ता’लिबान काबुलमा आइपुगेपछि सर्वसा’धारण अफगानीहरू त्यहाँबाट भाग्नका लागि कोशिश गरिरहेका छन् । त्यस’क्रममा उनीहरू काबुल विमानस्थलमा भेला भएका छन् । तर उनीह’रू सबैलाई भित्र पस्न दिइएको छैन ।
य’सैबीच सर्वसाधारण अफगानीहरूले आ’फ्ना सन्तान विदेशी सै’निकहरूलाई सुम्पिरहेको दृश्य देखिएको छ । तालिबानबाट आफ्ना ब’च्चा सुरक्षित रहू’न् भनी उनीहरूले विमानस्थलको पर्खालमा उभिएका सैनिकलाई बच्चा स’मात्न दिएका हुन् । विदेशी सै’निकहरूले काँ’डे’ता’र लगाएको पर्खालमा चढेर तलबाट साना बच्चा लिँदै विमानस्थल प्रांगणमा राखिरहेका छन् । य’स हृ’ द’यविदारक दृ’श्यले धे’रैजनाको म’न छि’या’छिया भएको छ ।
संयुक्त राज्य अमे’रिकाको सेना अफगानिस्तान प्र’वेश गरेको झन्डै २० वर्ष’पछि सरकार न’राम्रोसँग ढलेको छ। राष्ट्रपति असरफ घनीले देश छाडे’का छन्। सेना लड्ने इच्छाशक्ति गुमाएर अ’स”फल बनिसकेको छ। क्रूर र उत्तेजित तालिवानले पहिले नै क’ठोर का’नुनी प्रणा’ली स्थापित गरिसकेको थियो। आफ्नो अधिकारअन्तर्गतका क्षेत्रहरूमा महिलाको अधिकार नियन्त्रित गर्‍यो। अ’हिले का’बुल कब्जा गरेको छ। त्यहाँका जनता एक नयाँ मा’नवीय सं’क’टमा डुबेका छन्। अमेरिकी सेना र कुटनीतिज्ञहरू बा’हिर निस्कन हा’ र गु’ हार मा’ गिरहेका छन्।
अल कायदा सहयोगी ता’लिवान अब राजनीतिमा पूर्ण शक्तिशाली नभए पनि सिंहझैं बलियो भएर उदा’एको छ। अफगानिस्तानको अहिलेको अवस्थाका लागि धेरैले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बा’इडेनको सेना फिर्ता बोलाउने निर्णयलाई नै दो’ षी ठहर्‍याएका छन्। त’र तालिवानको लामो सम’यदेखि स’ञ्चित शक्ति र अफ’गान राज्यको मौलिक कमजोरी नै यसका कारण बनेका छन्। ता’लिवानले यो अन्तिम ल’डा’इँका लागि वर्षौंदेखि मैदान तयार पारेको थियो।
तालिवान ल’डा’कुहरूले नजिकैका सहरसहित देशभरका जि’ल्लामा गहिरो प’दछाप छाड्दै अन्ततः तीमाथि नियन्त्रण कायम गर्‍यो। हा’लैका दिनमा सहरी आ’ क्र’ म’णहरूका लागि आफूलाई बलियो बनायो। ता’लिवान ल’डा’कु’हरूले अ’फगान सेनाहरूबाट ठूलो मा’त्रामा हा’ त’ ह ति ‘या’र बरामद गरे। उनीहरू ला’ ‘गू औ ‘ष धको व्या’पार गरेभन्दा बढी आर्थिक स्रोत जुटा’उन सफल भए जसले एक धनी स’शस्त्र समूहलाई अझै ध’नी बनायो। ता’लि’वानको यो वर्त’मान प्रगति भने कतै सार्वजनिक भएको छैन।
मामा भान्जीलाई राती रङ्गेहात भेटियो, गाउँलेले प्रत्यक्ष भेटेपछि गाँउ नै उर्लियो, मामा पक्राउ परे, सोच्नै नसकिने घटना (भिडियो सहित)